Wararka - Dhismaha Kooxda Dibedda ee Huyssen –Hawlaha Rafting
Si loo hagaajiyo cadaadiska shaqada, loo abuuro xamaasad, mas'uuliyad, iyo jawi shaqo oo faraxsan, kobciya nolosha shaqaalaha hiwaayadda, hagaajinta daryeelka shirkadda, iyo kordhinta isgaarsiinta iyo isdhexgalka shaqaalaha, Huyssen Power ayaa abaabushay koox dhisme koox koox ah shalay.
Mawduuca dhacdadan ayaa ah “La kulanka caqabado cusub, Abuuritaanka guulo cusub”, rafting hal maalin ah iyo hawlo fuulitaan ah oo ku yaal Gorge Huangteng, Qingyuan. Ujeedada hawshu waa in la kobciyo niyadda kooxeed ee shaqaalaha iyada oo loo marayo hawsha rafting -ka kooxdan, kor u qaadidda wadajirka shaqaalaha, iyo kor u qaadista is -fahamka iyo is -dhexgalka wada -shaqaynta ee u dhexeeya waaxyaha iyo shaqaalaha kala duwan.
Buuxinta siddooyin biyo -xireenno ah, biyuhu waa cad yihiin, qabow iyo soo -jiidasho leh, iyo qaansoroobaadyada ayaa inta badan sudhan. Waddada dhexdeeda, waxaan sidoo kale daawan karnaa meelaha dhagaxa ah ee la yaabka leh, biyo -dhacyada waaweyn, iyo hirarka buluugga ah. Wali waxaan nahay kuwo aan la koobi karin, oo leh dhadhan aan dhammaad lahayn
Iyada oo loo marayo hawsha dhisidda kooxdan, qof walba wuxuu kobciyay aqoon dheeraad ah oo ku saabsan juqraafiga iyo bani'aadamnimada inta lagu jiro ciyaarta. Dhismaha kooxda qulqulaya ee xamaasadda leh ayaa sidoo kale xoojiyay ruux walba oo wada jir ah iyo miyir -kooxeed, isku -duubnida iyo awoodda dhexe ee meheradda, waxayna kor u qaadday saaxiibtinimada quruxda badan ee ka dhaxaysa asxaabta. Dareen ahaanna waxaan uga mahadcelinayaa shirkadda hawlaha rafting -ka ee ay qorshaysay Huyssen Power, waxaanan rajaynayaa in shirkaddu ay sii waddo “inay istaagto bar -bilow cusub, la kulanto caqabado cusub, abuurto natiijooyin cusub, oo ay samayso awood koronto oo wanaagsan”.
beddelidda korontada hab hab, Awoodda Awoodda La -habeeyay, Awoodda Awoodda Isbeddesha, Led Strip Light transformer, Awooda Korantada Dc, Led Strip Light Power Supply,